SIILAANYO IYO FAYSAL OO KAMARADA SHACABKU QABTAY | Toggaherer's Blog
« GUDIDA DOORASHOOYINKA AYAA HESHIISKA LALA SAXEEXAN KARAA EE MA AHA MADAXWEYNAHA
INDEPENDENCE DAY 18 TH MAY FASHION DAY OR A CHANCE TO REFLECT ABOUT WHOM WE ARE AND WHO WANT TO BE »
SIILAANYO IYO FAYSAL OO KAMARADA SHACABKU QABTAY
Waxaan salaamaya dhamaan warbaahinta Soomaalilnd iyo akhristayaashoodaba, waxaan kaloo salaamayaa inta danaysa jiritaanka iyo horumarka JSL.
Akhritayaal waxa maanta dhamaaday dulqaadkii dadweynaha, waxa ishii shacabku si fiican u qabatay shaqsiyaadka caadaystay xumo abuurka iyo samo xabaalka, shaqadoodiina noqotay ka dabo wahwahlaynta xukuumadda jirta,balse aan iyagu wax qorshe ah ilaa hadda soo bandhigin. Hadafkoodoo dhamina isugu biyo shubtay maruun Madaxweynaha talada haya Md.Daahir Rayaale Kaahin inuu kursiga ka dego. taladase kumay darin in hadduu maanta madaxweynuhu is casilo, damacooda kursidoonimo horseedi karo dagaal sokeeye oon laga soo waaqsan oo daba dheeraada,xornimada JSL-na mar labaad xabaashii 1960-gii ay ku dhacday dib ugu celiya.Iyada oo maanta dowladi jirto oo sharci iyo kala dambeyni jirto shaqsiyaadka caadaystay xume-talintu,maxay samayn lahaayeen hal maalin oo dalku galo jawi dowlad la,aaneed? qof kastaa taas jawaabteeda waa garan karaa.
Madaxweynuhu waa u diyaar inuu kursiga ka dego, haddii laga helo doorashada, si taasi u dhacdana waa in sifo sharciya loo soo maraa. Labada gudoomiye ee Kulmiye iyo Ucid Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Md. Faysal Cai Waraabe waxa u muuqda kursiga oo qudha,balse wax dan ah oo ay dadka iyo dalka ka leeyihiin ma jirto. Taasna waxa caddaynaya:
1- Mar walba waxay waqtiga ku lumiyaan aflagaado shaqsiyadeed oo aan loo meel dayin iyo hadalo anshaxa siyaasadda ka fog.
2-Ilaa hadda lamay iman qorshe siyaasadeed iyo mid waxqabad toona oo berri hadday talada dalka ku guuleystaan dalka lagu maamulo, isla markaana ay taageerada shacabka ku hantaan.
3-Waxay ka mideysan yihiin in dalka la geliyo xaalad jaho-wareer siyaasadeed oo lagu burburinayo kala dambeynta iyo deganaansha jira, si ay ugu suurto gasho damacooda guracan ee keli talisnimo.
Labada gudoomiye kama madhna ogaanshaha inaanay marnaba suurto gal ahayn inay ku guuleystaan doorashooyinka madaxtooyada si xalaal ah, maadaama shaqsigii shalay ka guuleystay maantana la tartamayo, sidaas darteed ayay u doorbideen inay wax ku raadiyaan si sifaha sharciga ka baxsan.
Akhristoow bal u fiirso inta dibindaabyo iyo jalaafo ee ay u dhigeen hanaansocodka u diyaargarowga doorashooyinka madaxooyada:
1-Waxay si cagajiid ah usoo xuleen xubnaha komishanka qaranka ee xisbiyadooda,taas oo lumisay waqti badan, loona sababayn karo qodobada ugu waaweyn ee dibudhaca doorashooyinka.
2-Waxay wax kama jiraan ka dhigeen go,aankii golaha guurtida ee waqti kordhinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa,iyagoo jebiyey qodob dastuuri ah horseedina kara isku dhac. (Mucaaradku golaha guurtida waxay siiyeen kalsooni buuxda ka hor intaan la codeyn,codeyntii ka dib way qaadaceen,taas oo cadaynaysa inay tooda qudha eeganayaan).
3-Waxay iclaamiyeen inaanay aqoonsan doonin dowladda wixii ka dambeeyey (Kulmiye 6-Abriil iyo Ucid 5-May),taas oo ka dhigan inay dalka la rabeen inay fawdo iyo sharci la,aani ka jiro.(Toodii may noqon oo rabi iy ragbuu leeyahay dalkani).
4-Waxay soo jeediyeen in la bedelo komishanka doorashooyinka.(geeloow geed walba cunoo,maalintaad ciin daaqdaa laguu yaabaa). Tani waxay daaha ka rogaysaa sida aan gabashada lahayn ee ay ugu badheedheen in aanay daacad ka ahayn in doorasho dalkan ka qabsoonto.
Gudoomiyaha golaha guurtida ee JSL Md.Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa soo jeediyay in haddii la rabo in doorashadu xilligeeda ku qabsoonto in si wadajir ah axsaabta qaranka iyo golayaashuba kalsooni u siiyaan komishanka qaranka,lana hawlgalaan ee maaha in xiligan kalaguurka ah lagu andacoodo bedelaad komishan.
Habar dhali weydey aleelo ku waalataye waxay maanta Siilaanyo iyo Faysal ku andacoonayaan in gudidii isu xil qaantay xallinta khilaafaadka siyaasadeed ee labadan shaqsi sababeen aanay qaadan go,aanadii ay soo jeediyeen oo ahaa 5 qodob,balse ay ku adkeysanayaan inay qodob lixaad oo ay jeebkooda kala soo baxeen ku darsadaan oo loo fuliyo.
Gudidani waxay xisbiyada mucaaradka ku qanciyeen inaanay heshiis dhex dhigin saddexda xisbi qaran oo u baahan saxeexid balse ay sidii maxkabad go,aano u yeedhiyeen ayna ku khasban yihiin inay saddexda dhinacba qaataan madaama oo ay markii horeba siiyeen kalsooni buuxda.
Arrinta maanta ay la shir yimaadeen mucaaradku ee ka hadlaysa saxeexa maaha in shacabka lagu jaho-wareeriyo oo si khaldan wax loogu turjumo, shicibkuna maaha inay wax kasta oo lee sheego ay qaataan balse ay arrintan wax ka weydiiyaan dadka aqoonta u leh arimaha sharciga. Qodobada gudidu soo jeediyeen maaha heshiis (Agreement) dhex maray axsaabta qaranka, balse waa go,aano is afgarad (Memorrandum of understanding) oo khasab ah in axsaabtu qaataan, maadaama oo markii horeba ay kalsooni siiyeen gudida.
Waxa lasoo gaadhay waqtigii sida dhabta ah loola xisaabtami lahaa hogaanka xisbiyada mucaaradka oo majarihii mucaaradnimo ka leexday noqdayna qarandumis.
Labada gudoomiye waxay sheegeen in xukuumada jirtaa xidhiidh la leedahay madaxda dowladda Shariifka,taas oo aanay wax cadayn ah u hayn, balse Kulmiye loo hayo cadaymo cad inuu xidhiidh toos ah iyo mid dadbanba la leeyahay Dowladda Shariifka.
Labada gudoomiye qodobada kor ku xusan oo dhan haddii lagu maxkamadeeyo waxay ku geli karaan xabsi daayin.
Isku soo wada duuboo labada gudoomiye waxa ka go,an in dalka khalkhal la geliyo si doorashooyinka September loo ballansan yahay mar kale dib u dhacaan, oo markaa sida ay iyagu iclaaminayaan golayaashu isaga yimaadaan ciddii dalka doorasho gaadhsiin lahayd, taas oo ay u malaynayaan inay tahay sida qudha ee ay jaanis ku yeelan karaan.
Waxaan labada gudoomiye u sheegaynaa in danta shacabku ka muhiimsan tahay dantooda gaarka ah, markaa ay u diyaar garoobaan ka qaybqaadahada doorasho xor iyo xalaal ah, maanta isha shacabkaa idin haysa, talaabo kasta ama isku day kasta oo dhinaca xun aad u qaadaan godka sucad-xumda eed ku jirtaan buu idiin sii dheeraynayaa,marka “Sanqadh tirasho iyo saamo jiidis kala daaya” oo la yimaadda qorshe siyaasadeed iyo mid wax qabadba, halka aad dacaayadaha raqiiska ah isku maaweelinaysaan.
Codka shacabku wuxuu idin leeyahay:
-Saansaanka siyaasadiina guracan ee maanta waan garan karaa saadaashiisa sida ay ku dambeyn karto.
-Is xukuma intaanaan idin xukumin.
-Riyada aad ku jirtaan run uga guura.
This entry was posted on May 10, 2009 at 12:01 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.